Banyere anyị - Foshan Tongyida eweli Equipment Co., Ltd
FOYO yinye ngọngọ
HHG Chain nkanka
HSZ Chain nkanka
Super Lux Chain nkanka
Tojo Chain nkanka
PA Mini Electric ndoli
Foshan Tongyida eweli Equipment Manufacturing Co., Ltd pụrụ iche na imewe, rụpụta na ọkọnọ nke eweli na hoisting akụrụngwa.
Mgbe ihe 5 afọ mmepe, taa anyị bụ otu n'ime ndị na-eduga ụlọ ọrụ ubi anyị, anyị nwere 100 mkpara maka ọkachamara tozuru okè imewe otu, àgwà akara otu, mmepụta management otu na ahịa ọrụ otu egwuregwu.
Tongyida eweli Equipment Group nwere ike inye niile nke gị akwụkwọ ntuziaka na-ebuli ngwá na ihe onwunwe njikwa mkpa na-ukwuu dị ka asọmpi ahịa. Na International ISO nkwado maka ya quality usoro na OA, GS, TUV asambodo, Ìgwè anyị bụ ndị mpako na-anabata ka ị gaa na anyị ụlọ ọrụ ma na-atụ anya ịnụ olu gị.
Anyị arapara ụkpụrụ nke "àgwà mbụ, ọrụ mbụ, aga n'ihu mma na ọhụrụ izute ahịa" na "efu nkwarụ, efu mkpesa" dị ka àgwà na ebumnobi.
More Enwe gị Cantonfair
2017 ịga Middle East Hardware Exhi ...
Ịga Canton ngosi oge ọ bụla kwa afọ